ငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ..ငါ့ဘေးနားမှာ ငါ့ကို ချစ်တဲ့ငါ့ဖေဖေမရှိတော့တာလည်း ကြာပါပြီ.
၁၉ နှစ်တောင် ရှိရော့ပေါ့ .ငါ့ကို အနစ်နာခံ အလိုလိုက်တတ်တဲ့ ငါ့ခင်ပွန်းလည်း မရှိရှာတော့ဘူး.. ငါသိပ်ချစ်တဲ့ ငါ့သားနှစ်ယောက်လည်း
ငါနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး...ငါ့မွေးနေ့မှာ ငါ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသွေးသားရင်းချာတွေကို ငါ့နားမှာ ရှိစေချင်လိုက်တာ
ငါလည်း သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်ပဲလေ.ငါ့စိတ်ဓာတ်ကိုမာကျောတည်ငြိမ်အောင် ထိန်းကျောင်းပြုပြင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အခွင့်သာရင်တော့ ငါ့သားလေးနှစ်ယောက်ကို ငါ့နားမှာ ရှိစေချင်လိုက်တာ. အမေ့ရင်တွေနာလိုက်တာ သားတို့ရယ်…ဘယ်တော့များမှ အခွင့်သာမှာလည်းဟင်…
အိန္ဒိယမှာ ငါချစ်တဲ့ ငါ့မေမေနဲ့အတူတူ အောက်စဖို့မှာ ငါချစ်တဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ အမေရိကန်မှာ ငါ့ရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း မသန်းအိတို့နဲ့အတူတူ ဘူတန်မှာ ငါချစ်တဲ့ ငါ့ခင်ပွန်းနဲ့အတူတူ အင်္ဂလန်မှာ ငါချစ်တဲ့ ငါ့မိသားစုနဲ့အတူတူ
ငါ့ရဲ့ဘ၀ဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းခဲ့တာပါ. ငါ့ကိုမွေးပြီး နှစ်နှစ်အကြာမှာပဲ ငါသိပ်ချစ်တဲ့ ငါ့ဖေဖေကို မလိုသူတွေက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်. အဲဒီ့နေ့က ရုံးကားကြီးတစ်စင်း အိမ်ရှေ့ကို ထိုးရပ်လာလို့မေမေ့ကို လူတစ်ယောက်က အပြေးလာခေါ်လို့
မေမေ ဆံပင်ဖရိုဖရဲနဲ့ ပြေးလိုက်သွားလို့ ငါ့နဲ့ ငါ့အစ်ကိုတွေကို အိမ်မှာထားခဲ့လို့
ငါဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူး အဲဒီ့နေ့က ငါတစ်ခုကိုတော့ မှတ်မိနေတယ်.
ညနေခင်းပြန်လာရင် ငါ့ကို အမြဲနမ်းရှုပ်ကျီစယ်တတ်တဲ့ငါချစ်တဲ့ ငါ့ဖေဖေ
အဲဒီ့နေ့က ပြန်မလာခဲ့ဘူး မျှော်လိုက်ရတာ ဖေဖေရယ်..
လာတဲ့လူတိုင်းက မေမေ့ကို စကားတွေလာပြောကြတယ်. အမျိုးသမီးကြီးတွေက မေမေ့ကို လာပြီး အားပေးကြတယ်.ငါတို့ မောင်နှမ သုံးယောက်ကို ကြည့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေမှာ
ကရုဏာငွေ့တွေ ယှက်သန်းနေခဲ့တယ် ..ငါသိပ်တော့ မမှတ်မိခဲ့ပါဘူး
ဖေဖေရယ်.. ဘာလို့ သမီးတို့ကို ထားခဲ့တာလဲဟင်…
လွှမ်းမိုးနေခဲ့တယ် ဖေဖေ တကယ်ပြန်မလာခဲ့တော့ဘူးနော်…
ဘာလုပ်နေကြတာလဲ မေမေရယ်လို့ မေးတော့ မေမေက တည်ငြိမ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ငါ့ကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ချိုမြတဲ့လေသံလေးနဲ့ ပြောတယ်.ငါ့ခေါင်းလေးပေါ်မှာ မေမေက သူ့လက်ကလေးကိုတင်ထားလို့ပေါ့
လိုက်ခဲ့ရမှာလေ. သံအမတ်ကြီးဆိုတာ ဘာလဲဟင် မေမေ.
ပြေးဝင်ခဲ့တယ်. မေမေက သိပ်တော်တာပဲနော်. ငါ့လို အရွယ်လေးကို နားလည်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တယ် မေမေ့ကို ခုချိန်ထိသမီးသတိရနေတုန်းပါပဲ မေမေရယ်…
စံနမူနာထားလို့သမီးရဲ့ ဘ၀ခရီးတလျှောက်မှာ အောင်ပွဲတွေ အလီလီ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လေ…
I'm proud of you, honey! လို ငါ့မျက်နှာကို ရွှမ်းရွှမ်းစားစား စိုက်ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်တဲ့
မေမေ့မျက်ဝန်းတွေကို ငါမက်မောလိုက်တာ…မေမေက စကားတွေ အများကြီး မပြောခဲ့ပါဘူး.
အဲဒီ့ညက ငါတို့အိမ်မှာ ပါတီလုပ်ခဲ့ ကြတယ်. အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်လို့
သီချင်းတွေကို တစ်ယောက်တစ်ပေါက် သီဆိုကြလို့ ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်ကိုဖွင့်ပြီး အတူတူကခုန်ကြလို့ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေ ထင်ကျန်နေဆဲပါပဲလေ…
စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်. I believe in you! တဲ့. ငါကြက်သီးတွေတောင်ထသွားခဲ့တယ်.
မေမေ၀မ်းနည်းနေတာ ငါသိတယ်. ဒါပေမယ့် မေမေမငိုခဲ့ဘူး .လေယာဉ်ပေါ်မှာ ငါငိုနေခဲ့မိတယ်.
ငါဝမ်းနည်းလို့တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး ..ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့ ငါချစ်တဲ့ ငါ့မေမေအတွက်
သူ့အိမ်မှာပဲ ငါ့ရဲ့ အနာဂတ်ခင်ပွန်းလောင်း မိုက်ကယ့်ကို စတွေ့ပြီးရင်းနှီးခဲ့ရတယ်.သူကတိဗက်လူမျိုးတွေအကြောင်းလေ့လာနေတဲ့
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပဲလေ.တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ…
နယူးယောက်မြို့ကို ငါထွက်လာခဲ့တယ်. ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်ဖို့ပေါ့
မသန်းအိတို့အိမ်မှာ ငါနေခဲ့တယ်. သူက ကုလသမဂ္ဂမှာ အလုပ်လုပ်နေတာလေ
ငါ့နိုင်ငံသားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်ရတာမသန်းအိက ငါ့ကို အလုပ်လျှောက်ဖို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်
ငါအလုပ်ရခဲ့တယ်.Administrative and Budgetary Questions မှာ Assistant Secretary အဖြစ်နဲ့ပေါ့.ကျောင်းတက်နေတာကို ငါခဏနားပြီးတော့ အလုပ်ကို အချိန်ပြည့်လုပ်ခဲ့တယ်
မဟုတ်ရင် ဘယ်အရာကိုမှ အာရုံစိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ.ညနေရုံးဆင်းချိန်တွေနဲ့
စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာ ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Volunteer၀င်လုပ်ခဲ့တယ်
မိုက်နဲ့ ငါလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်. သူနဲ့အတူတူ ဘူတန်ကိုထွက်ခွာခဲ့တယ်.
ငါကတော့ တော်ဝင်နိုင်ငံခြားရေးရာဌာနမှာ Research Officer အဖြစ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်.
ဟိမ၀န္တာတောင်ပြာတန်းကြီးတွေရဲ့ အရိပ်အောက်မှာငါချစ်တဲ့ ငါ့ခင်ပွန်းနဲ့အတူတူ ငါမြတ်နိုးတဲ့ အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တယ်.
ငါ့ရဲ့ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား မေမေ့ကိုတော့ ငါတိုင်ပင်ခဲ့ပါသေးတယ်
မေမေကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ I trust you… တဲ့
တကယ်တော့ ဒီနေ့အချိန်အထိ ငါ့စိတ်ဓာတ်တွေ မြဲမြဲခိုင်မာစွာနဲ့ ငါ့ရဲ့ အဖျက်အင်အားစုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံနေနိုင်သေးတာ ငါ့နှလုံးအိမ်ထဲကို လောင်းချခဲ့တဲ့ မေမေ့ရဲ့
သံမဏိစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ပဲလေ…ငါဘယ်တော့မှ ဦးကျိုးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး…
ငါမိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲ..အဲဒီနေ့က မေမေနဲ့ ငါစကားအကြာကြီးပြောဖြစ်တယ်.
မေမေရယ်လေ.ငါ့ကို စကားတွေ တတွတ်တွတ်နဲ့ မှာနေလိုက်တာ မပြီးတော့ဘူး
လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စာတမ်းပြုစုခဲ့တယ်. ငါကျေနပ်အားရဂုဏ်ယူမိပါတယ်.
ကလေးတွေကို ခေါ်ပြီး ရန်ကုန်ကိုအလည်သွားခဲ့တယ်. အဖွားဖြစ်သူနဲ့ တွေ့ပေးရအောင်ပေါ့
ကြည်နူးလိုက်တာ.ရေစက်ချနေတဲ့ ငါ့လက်တွေ တုန်နေခဲ့တယ်.
မိုက်က စာတမ်းတွေ ပြုစုနေခဲ့တယ်. အင်္ဂလန်ကိုလည်း ငါခဏပြန်ခဲ့သေးတယ်.
ငါ့ရဲ့ Advanced Degree အတွက် London School of Oriental and African Studies
တယ်လီဖုန်းသံမြည်လာခဲ့တယ်. ခါတိုင်းလိုပဲ ကောက်ကိုင်လိုက်ခဲ့တယ်
မေမေလေဖြတ်သွားတယ်တဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာပဲ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ငါထွက်ခွာခဲ့တယ်
ကုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ မေမေ ငါ့ကို ကြိုးစားပြုံးပြနေတဲ့မေမေ
စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ သေနတ်သံများကြားမှာ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအများ သွေးမြေကျခဲ့ရတယ်.
သေနတ်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူးတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို သေနတ်ကြိမ်းကြိမ်းသွားခဲ့တယ်
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီတဲ့ ..ငါဘာလုပ်ရမလဲ
ဒါဆိုရင်တော့ ငါ့မိသားစုနဲ့အတူတူ အသိုက်အမြုံမပျက် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေလို့ရတယ်.
ဒါပေမယ့် သေချာတယ် ငါလိပ်ပြာမလုံဘူး..
ငါ့ကိုယ်ထဲမှာ အာဇာနည်သွေးတွေ စီးဆင်းနေတယ်. သူတို့ကို ငါရှက်တယ်. ငါမပြန်ဘူး
ငါဒီမှာနေမယ် ငါ့တိုင်းပြည် ငါ့လူမျိုးအတွက် ငါ့ရဲ့ပေးဆပ်မှု အခန်းကဏ္ဍ စတင်ခဲ့ပြီ
သူတို့ ငါ့ကိုလိုအပ်နေပြီလို့ ငါခံစားရတယ်. ဟုတ်တယ် ..ငိုကြွေးနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ငါမျက်ကွယ်မပြုနိုင်ဘူး ..ငါဒီမှာနေမယ်..ငါမပြန်တော့ဘူး
ငါ့ဖေဖေအတွက်...ငါမြန်မာပြည်မှာ နေပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ဖယ်ရှားမယ်.
ဒါကို ငါအသုံးချခဲ့တယ် ..စစ်ဘီလူးရဲ့ မျက်နှာဖုံးကို အကြမ်းမဖက်
အနုနည်းနဲ့ ခွာချပြနိုင်ခဲ့တယ်. ငါ့ကိုအသေတောင်ပစ်သတ်တော့မလို့တဲ့. .သေနတ်ပြောင်းတွေနဲ့ ချိန်ထားလိုက်ကြတာ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ သူတို့ဆီကို ဦးတည်ပြီးလှမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်
သူတို့ မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါဘူးလေ. သူတို့ကြားထဲက ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ငါ့ကို
လူထုကြီးက "ဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး" ဆိုပြီး တခဲနက်အားပေးလိုက်ကြတာ
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက် မေမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပို့ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ မနည်းဘူးမေမေရယ်.မေမေ့ကို မြင်စေ့ချင်လိုက်တာ...မေမေ့ကို သဂြိုဟ်တဲ့နေ့မှာပဲ မေမေ့ရုပ်ကလာပ်ရှေ့မှာ သမီးတိုင်တည်သစ္စာပြုခဲ့တယ်
ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်.ဒီတာဝန်ကို ကျေပြွန်အောင် သမီးဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပါ့မယ်
ရွေးကောက်ပွဲကို ခြွင်းချက်မရှိ အနိုင်ရခဲ့တယ်..အရှက်မရှိလိုက်ကြတာလေ.
ငါတို့လွှတ်တော်အမတ်တွေကို လိုက်ဖမ်းတယ် ..ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အကျုံးမ၀င်ပါဘူးလို့ ဗြောင်ငြင်းတယ်.ငါ့ကိုလည်း အကျယ်ချုပ်ချခဲ့တယ်
အဲဒီကတည်းကပဲ ငါ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်၊ အကျယ်ချုပ်ပြန်ချလိုက်နဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေ လှည့်ကစားခဲ့တယ်.. ငါ့အပေါ်ရက်စက်လိုက်ကြတာ..ကိုယ်ချင်းမစာလိုက်ကြတာ
ပြောရက်လိုက်ကြတာ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုတွေနဲ့ ငါ့နာမည်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတာ နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာဖောက်သူတဲ့ လူမျိုးခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသူတဲ့
ဒါတွေကို ငါတုံ့ပြန်မနေခဲ့ပါဘူး ငါလုပ်စရာရှိတာတွေကိုပဲ အေးအေးဆေးဆေး မမှားရအောင် ငါလုပ်ခဲ့တယ် ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ငါ့အနေနဲ့ပိုပြီးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်လေ..
မေမေဂုဏ်ယူပါတယ် သားကြီးရယ်…မေမေ့အတွက်ရတဲ့ ဆုကြေးငွေကို Prospect Burma ဆိုတဲ့ NGO အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး မြန်မာပြည်က ပညာတော်သင်ကျောင်းသားတွေကို
ပံ့ပိုးကူညီနေတာ ခုချိန်ထိပဲလေ. မေမေက ကိုယ်ကျိုးရှာသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သားတို့အသိဆုံးပါ သားတို့ကို ပစ်ထားချင်လို့ ပစ်ထားတာမဟုတ်ရပါဘူး ..သားတို့ကို သိပ်ချစ်တာပေါ့ သားတို့နဲ့ အတူတူသိပ်နေချင်တာပေါ့..ဒါပေမယ့်သားတို့ရယ်
သားတို့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေထက် နိမ့်ကျနွမ်းပါးနေတဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထုကို မေမေပိုချစ်မိတယ်..ဒါကို သားတို့ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါနော်…
ရက်စက်လိုက်ကြတာကွယ်..ရက်စက်လိုက်ကြတာ မြင်ရကြားရတာ ယုံနိုင်စရာတောင်မရှိဘူး
သတ်ဟေ့သတ်ဟ ချဟေ့ချဟ ဆိုတဲ့ စစ်ဘီလူးရဲ့ ကြိုးဆွဲရုပ်တွေအောက်မှာ
တိုင်းပြည်ရဲ့အညွှန့်အဖူးလေးတွေလွင့်ကြွေခဲ့ရရှာပြီ…အဲဒီညက ကောင်းကင်ပြာကြီးမှာတောင် သွေးရောင်တွေလွှမ်းနေခဲ့တယ်.ရင်ထဲမှာ ဆို့နစ်လိုက်တာ ချစ်သားချစ်သမီးတို့ရယ်..
သားတို့သမီးတို့ ကောင်းရာသုဂတိလားနိုင်ကြပါစေဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကို ဘယ်ဘ၀မှာမှ ထပ်မံ မကြုံတွေ့နိုင်ကြပါစေနဲ့တော့လို့မေမေစု ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွယ်…
နွမ်းလျလှပါပြီ မျက်စိကိုမှိတ်၊ နားကိုပိတ်ပြီး တရားစီရင်ချင်သူတွေရဲ့ အတ္တများအောက်မှာ
အခန်းပြတင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်. ငါ့ကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ ရဲဘော်လေးတစ်ယောက်က ငါ့ကို အလန့်တကြားမော့ကြည့်တယ်. မကြောက်ပါနဲ့သားရယ်
ငါ့ကို ဦးညွှတ်တယ်. သားစာဆက်ကျက်ပါကွယ်.. စိတ်ကိုအေးအေးသာထားပါ.
ဒီပို့ကို မူ၇င်းမပျက်ေ၇းသားခွင့်၇တာကို ၀မ်းသာမဆုံးပါဘူး..
အမေ့ကို ချစ်တဲ့စိတ် သနားတဲ့စိတ် မြန်မာပြည်လူထုတွေပေါ်မှာ တိုးတက်စေချင်တဲ့ စေတနာကြောင့် ၇တီေ၇းလိုက်တာပါ..
အမေ့ကို လေးစားသလို ချစ်သလို မိမိကိုယ်ကိုလဲ လေးစားပါ
တိုင်းပြည်ကိုလဲ ချစ်ပါလို့ ..
အမေက အသက်အ၇ွယ်ဖြင့် ကြီး၇င့်လာပါပြီ ..သူမကို ချစ်၇င် သနား၇င် တို့တွေ ပိုကြိုးစားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း စေတနာထား၇င်း
ဒီနေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၇ဲ့ ၆၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါ..
အနာဂတ်မှာ သူမ၇ဲ့ အတွေးစိတ်ကူး ပုံဖော်မှုဟာ ဘယ်လိုရှိနေမလဲ..
ရတီတို့ တချက် လေ့လာကြည့်၇အောင်..
Aung San Su Kyi....... Democratic leader.
Aung San Su Kyi is an opposition leader in her home country of Myanmar and the winner of the 1991 Nobel Prize for Peace.
" If you´re feeling helpless, help someone "
အကယ်၍ သင်ဟာကူညီခံ၇မှု မဲ့နေတယ်လို့ ခံစား၇တယ်ဆို၇င် တစုံတယောက်ကို ကူညီလိုက်ပါ..
ကြောက့်၇ွံ့ခြင်း နှင့် တခုတည်းသော တကယ့်လွတ်မြောက်မှုဟာ ကြောက်၇ွံ့မှုမှ လွတ်မြောက်တာပါ..
" Fear is habit ; I am not afraid."
ကြောက်၇ွံ့မှုဟာ အလေ့အထဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် ငါမကြောက်ဘူး..
She joked to mean of ငြိမ်ဝပ်ပိပြားေ၇း...
သူမ ဟာသလဲ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်
ငြိ်မ် ၀ပ် ပိ ပြားေ၇း ဆိုတဲ့ အာဏာ၇ှင်တွေ့၇ဲ့ မူဝါဒကို..
She admitted may i right or may i wrong.
သူမက ၀န်ခံခဲ့တယ် ငါမှန်ချင်လဲ မှန်မယ် မှားချင်လဲ မှားမယ်တဲ့
ကဲ သူမ၇ဲ့ သဘောသဘာဝလေးကို သိလိုက်ပြီ ဆိုတော့..
Human ...... လူသား
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ အထင်က၇ ဘာသာလေးမျိုးရှိတယ်..
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ လူသားတွေ အတူတကွ နေထိုင်တယ်..
နေထိုင်တဲ့ လူသားတွေမှာ တူညီတဲ့ ခံစားချက် ဖြစ်တည်ချက်တွေ ရှိတယ်....
ငါ ၇ယ်တတ်တယ်. ချစ်တတ်တယ်.မျှော်လင့်တယ်. ကြိုးစားတယ်. နာကျင်တယ်. လိုချင်တယ်. ကြောက်တတ်တယ်..
ငါသိတယ် မင်းလဲပဲ ဒီလိုလုပ်မယ်လို့..
ဒါကြောင့် မင်းနဲ့ငါ တကယ်တော့ ဘာမှမကွာခြားပါဘူးလေ...
အဲဒီတူညီတဲ့ လူသားတွေက တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးပဲ ရသင့်ပါတယ်.. မင်းနဲ့ငါ တူညီတာ မင်းဘာလဲ မင်းဘယ်ကလဲ
မင်းဘယ်ဘာသာလဲ လဲ လဲ လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမလိုတော့ပါဘူး..
အကယ်၍ မင်းက မင်းနဲ့ မင်းကမ္ဘာကြီးကို တိုးတက်စေချင်၇င်.....
Change yourself first,world will change automatically..
မင်းကိုယ်မင်း အ၇င်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ ကမ္ဘာကြီးက သူ့အလိုလိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်..
( ဒီစာသားလေးက လူသားတဦးချင်းစီ ပြောင်းလဲ၇မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ )
You are not own me
besides you are not own yourself also..
မင်းငါ့ကို မပိုင်ဘူး.. ဒါ့အပြင် မင်းကိုယ်မင်းလဲ မပိုင်ဘူး..
In that truth what that you need more than that.
ဒီအမှန်တ၇ားကြောင့် ဘာတွေကို ဒီထက်ပိုပြီး လိုအပ်နေသေးလဲ..
( လောကကြီးမှာ အေ၇းကြီးဆုံးက ၃ ခုက...
၁) understanding နားလည်ပေးခြင်း
၂) Respect. လေးစားခြင်း
၃) Love. ချစ်ခင်ခြင်း တို့ဟာ အ၇မ်းအေ၇းပါပါတယ်...)
မင်းလဲ မင်းနေ၇ာ မင်းဘာသာ မင်းအယူအဆ
ငါလဲ ငါ့နေ၇ာ ငါ့ဘာသာ ငါ့အယူအဆ
ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး မှန်တယ် မမှန်ဘူးဆိုတာ
အဲဒီလူကိုယ်တိုင်ပဲ သိမှာပါ. .
မကောင်းဘူး မမှန်ဘူးလို့ ကိုယ်က မြင်နေ၇င် ပြုပြင်ပေးချင်၇င်
Acceptable. လက်ခံအောင် ပြောမှ၇ပါတယ်..
You must do what I say. Because that is true.
ဒါက အမှန်တ၇ားပဲ မင်းလုပ်ကို လုပ်၇မယ်ဆို၇င်
Human Rights is meaning less.
People will realize one day who are going wrong way.
Do not correct that to them by force.
မှားနေတယ်ဆိုပြီး ဖိအားနဲ့ မပြောင်းလဲပါနဲ့..
တနေ့ကျ၇င် သူတို့တွေ အမြင်မှန်၇မှာပါ..
However If you treat polite way of them not to do it,
But those people would like to do that let them do it.
သို့သော်လည်း မင်းက လူတွေပေါ်မှာ ယဉ်ကျေးစွာနဲ့
မှားယွင်းမှုကို မလုပ်အောင် တားနေပေမယ့်
သူတို့က လုပ်ချင်၇င် လုပ်ခွင့်သာပေးလိုက်ပါ..
Life is give and take..
ဘ၀ဆိုတာ ပေးခြင်း ယူခြင်းပါပဲလေ..
အထက်ပါ အမေစု၇ဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့
ပေါင်းစပ်ပြီး သူမ၇ဲ့ စေတနာနဲ့ ခံယူချက်ကို နားလည်နိင်ပါတယ်.
သူမကတော့ အကျိုးမဲ့ အကြောင်းမဲ့ အလုပ်တခုပေါ်လုပ်မှာ
အေးချမ်းပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေး၇င်း
ကျမ၇ဲ့ အမြင်နဲ့ အမေစုပေါ်သုံးသပ်ချက်
လူတယောက် အောင်မြင်တော့မယ်ဆို၇င် အတိုက်အခံ အဖျက်အဆီးများတယ်..
ကိုယ်က ခံနိုင်၇ည် ရှိဖို့နဲ့ အောင်မြင်မှုပေါါ်မှာ
မယစ်မူးဖို့ပဲ အဓိကကျ တယ်လေ..
ရတီကို အမေစုနဲ့ သိသလားတဲ့?
ဖြေလိုက်မယ်းမ သိဘူး..
ဟုတ်တယ် ဖတ်ရှုထားတဲ့ သူမ၇ဲ့ emotion ကနေေ၇းတာ..
သူမက သူမခံစားချက်တွေပဲေ၇းထားတာပါ..
ရတီက သူမ၇ဲ့ ခံစားချက်ကို ထုတ်ပြသူပေါ့..
ဟုတ်ပြီ အမေစုပေါ် အထင်လွဲနေတာလေး နဲ့ ၇တီအမြင်လေးကို
ရတီ ဒီပို့စ်ကို မေ၇းခင် အ၇င်က
တ၇ားကိုဘယ်လိုထိုင်၇မလဲ ဆိုတဲ့ပို့စ်တခုေ၇းခဲ့ဖူးပါတယ်..
အပိုင်း(၁) ပေါ့.. အဲဒီထဲမှာ ကံကံ၏် အကျိုးတ၇ား တ၇ားကိုလေးစားပုံ ထိုင်နည်းကအစ အစုံအစုံပါပဲ.. ဖတ်တဲ့သူတွေလဲ အများကြီးရှိတယ်.. မဖတ်၇သေးတဲ့သူလဲ ရှိတယ်..
ဟုတ်ပြီ ဘာများဆက်စပ်လို့လဲ ?
ဟုတ်ကဲ့ ပြောချင်တဲ့၇ည်၇ွယ်၇င်းက စိတ်ထားတတ်ဖို့ပါပဲ..
မသေခင် ဘာယူသွားနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်..
ဒါဆို၇င် အမေစုဟာ နှစ် ၂၀လုံး အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေလာတာ သူမဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ နေသလဲဆိုတာ တချက်လောက် တွေးကြည့်၇အောင် ..
တ၇ားသောနည်းလမ်းကို တ၇ားသော စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့သူဟာ
လောက၇ဲ့ အကောင်းအဆိုးတွေပေါ် ခံနိုင်၇ည်မ၇ှိပါဘူး..
ပြောချင်တဲ့ သဘောကတော့ သူမဟာ ကုလားကိုမျက်နှာပေးတယ်... ဘာညာပေါ့.. ကုလားဆိုတဲ့အမျိုးကို အမေစုခေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး..
လူက လူပဲ.. လေးစား၇မယ်..
လူမျိုးတို့ ဘာသာေ၇းတို့ကြောင့် နင်တို့အမျိုးက မကောင်းဘူး..
နင် ငါသုံးနေတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေမှာ ယဉ်ကျေးမှုမပါတော့ဘူး..
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် လေးစား၇ပါမယ်..
မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားတဲ့ တ၇ားတွေမှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာလူကိုပဲ လူလို့ထင်၇မယ်လို့ မဟောထားခဲ့ပါဘူး..
နိုင်ငံတနိုင်မှာ နေထိုင်တဲ့လူဦးေ၇များစွာ ရှိတဲ့အလျောက်
လူမျိုး ဘာသာတွေလဲ အမျိုးမျိုးရှိနေမှာပဲ..
မိမိက ဗုဒ္ဓဘာသာဆို ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ပေါ့.. ခ၇စ်ယာန်ဆိုလဲ ခ၇စ်ယာန် စသဖြင့်ပေါ့လေ ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်..
ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုက ဘု၇ားရှိခိုးလောက်၇ုံနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ တေ၇းတယူဂုဏ်ယူလေ့ ရှိတယ်.. ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၇ဲ့ အနှစ်သာ၇ကို တကယ်သိတဲ့သူက အ၇မ်းရှားပါတယ်.. အမေ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖေ ဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့ သားသမီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ
သြကာသတောင် သိပ်မ၇ ဆိုလို၇င်းနားမလည်ပဲ ကဗျာ၇ွတ်သလို၇ွတ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများကြီးပါ..
.ဘာလို့ ငါ့စကားနွား၇ ပြောချင်၇သလဲ..
လူကို လူလိုမြင် ကြင်နာသနားတတ်၇င် မအေးချမ်းဘူးလား..
အမေစုလို မိန်းမမျိုးမပြောနဲ့ ရတီ့ စိတ်ဓာတ်တောင်
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို အသက်ထက်ပိုချစ်တယ်.. တိုးတက်စေချင်တယ်..
ကူညီနိုင်တာ ကူညီမယ် ..
ဖေးမမယ် အားပေးမယ် ကြင်နာမယ်..
ဒီတော့ နှစ် ၂၀ လောက်အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေလာတဲ့
အမျိုးသမီးတယောက်၇ဲ့ အထီးကျန်မှု ကြံ့ခိုင်မှုတွေဟာ
ဒီတော့ သူမအနေနဲ့ နိုင်ငံကို ကူညီမယ် စောင့်ေ၇ှာက်မယ်
လူမျိုးတွေ ဘာသာတွေပါမှာ မဟုတ်ပါဘူး..
့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာ၇ှိတဲ့ ဘယ်သူမဆို အယုတ်အလတ် အမြတ်မေ၇ွူး
သူမတို့ မိသားစုလဲ နိုင်ငံထဲက
ဘယ်လို ခံယူမလဲ ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ..
ရတီက အားလုံးကိုခြုံပြီး သဘာဝကျကျလေးပြောပေးတာပါ.
Credit... ရတီ via Nurhad
Posted by Myo Lwin Aung at 3:04 PM